Kukho izikhundla ezingama-338 kwiNdlu yaseKhanada yaseKhanada, ebizwa ngokuba yiMalungu ePalamente okanye amaPhalamende, akhethwe ngokukhethekileyo ngabavoti baseCanada. Ipalamente ngayinye ibonisa isithili esinye sokhetho, esivame ukubizwa ngokuba ngumkhwele . Indima yamalungu ePalamente kukulungisa iingxaki kubaphathi kwiintlobo ezahlukeneyo zorhulumente karhulumente.
IPalamente yaseKhanada yisebe laseburhulumenteni le-federal yaseCanada, elihleli kwisikhululo sikazwelonke sase-Ottawa e-Ontario.
Umzimba uqulethwe ngamacandelo amathathu: ikosi, kulo mzekelo, ukumkani olawulayo waseUnited Kingdom, omelelwe ngumbutho, i-rhu lumente jikelele; kunye nezindlu ezimbini. Indlu ephezulu yi-Senate kunye nendlu ephantsi yiNdlu yeeNgingqi. Igosa likarhulumente libiza kwaye liqeshe ngalinye labathathi-105 kwiingcebiso zikaNdunankulu waseCanada.
Le fom ilalizuze ilifa elivela kwi-United Kingdom kwaye ke ke ikopi efana nayo yepalamente eWestminster eNgilandi.
Ngomxholo wezomgaqo-siseko, iNdlu yeeNgingqi iyinxalenye ephambili yepalamente, ngelixa i-Senate ne-monarch ingavumi ukuphikisa ukuthanda kwayo. Umgaqo-nkqubo we-Senate uhlalutyo oluvela kumbono ongezantsi kunye ne-monarch okanye i-viceroy inikezela ngokusemthethweni ukuba ukumkani enze amaphepha-mthetho. Igosa likarhulumente iphinda libize ipalamente, ngelixa i-viceroy okanye inkosikazi ichitha iphalamende okanye iqela ekupheleni kwiseshoni yepalamente, eqala ukunyulwa koonyulo jikelele.
Kuphela abo bahlala kwiNdlu yeeNgingqi babizwa ngokuba ngamalungu ePalamente. Eli gama alisetyenziswanga kubahlali, nangona i-Senate iyingxenye yepalamente. Nangona umthetho ungenawo amandla, abaphathi benkundla bathatha indawo ephakamileyo kwinqanaba lelizwe eliphambili. Akukho mntu unokukhonza ekamelweni elilodwa lepalamente ngexesha elinye.
Ukuqhubela enye yezihlalo ezingama-338 kwiNdlu yeeNqununu, umntu kufuneka abe ubuncinane ubuneminyaka engama-18 ubudala, kwaye umqhubi ngamnye usebenza kuze kube yilapho iphalamende ichithwa, emva koko afune ukunyulwa kwakhona. Iziqhelo zihlaziywa rhoqo ngokulandela iziphumo zobalo babalo. Kwiphondo ngalinye linamalungu angama-MP amaninzi njengoko anama-senators. Ubukho balo mthetho buye bangela ubungakanani beNdlu yeeNqununu ngaphezu kwezona zihlalo ezi-282 ezifunekayo.
Ngaba Ndifanele ndizuze iSiqinisekiso soLawulo loLuntu?
Bhiyozela i-Birthday Krishna kwiJanmashtami
I-adaming State State Admissions
Casca kunye nokubulawa kukaJulius Caesar
I-Biography kunye neProfayili kaAnderson Silva
Ukuqalisa Amandla Inkcazo - Ea kwiKhemistry
Iingxoxo zokuqala - kwi-Airport
IYunivesithi yase-Utah Admissions